ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း What is Love? Lesson 1
ကျွန်မဟာအထက်တန်းကျောင်းသူဘ၀မှာ ယောက်ျားများစွာနဲ့တွဲခဲ့ပြီး များစွာနာကျင်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မဟာ အလွန်ပင် ထိခိုက်လွယ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တစုံတဦးအား ကျွန်မကို ချစ်စေလိုတယ်လေ။ တစုံတဦးအား ကျွန်မကို အမှန်တကယ်ဂရုစိုက်စေလိုခဲ့တယ်။ ပြသနာကတော့ ချစ်ဖို့ အတွက်မှန်ကန်တဲ့လူကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိဖို့နှင့် ကျွန်မရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ သူကိုဝမ်းမြောက်စေလိုခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မ ကောလိပ်တက်တော့ ကျွန်မမှာ လက်ထပ်ဖို့နဲ့ချစ်ကြိုက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက် မရှိခဲ့ဘူး။ ထိုအချိန်က ကျွန်မ ဤသို့ တွေးခဲ့သည်။ အရမ်းပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အချိန်တွေ ငါ့မှာရှိလာမယ်။ အတွေ့အကြုံတွေလည်း အများကြီးရပြီး တစုံ တဦး (သို့) တစုံတခုရဲ့ချည်နှောင်ထားခြင်းကို လုံးဝမခံဘူး။ တခြားစကားနှင့် ပြောရရင်၊ တာဝန်ကင်းမဲ့စွာနဲ့ အသက်ရှင်မယ်။ ““ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းပြီး သင့်တင့်တဲ့ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံမှု့များကိုပဲ ရယူပြီး ကောလိပ်ကျောင်းသူ ဘ၀ဟာ ဘယ်လိုလဲ ဆိုတာကို သိအောင်လုပ်ရမယ်။””
ဂျိုးကို မတွေ့ခင်အထိ ကျွန်မဟာအခြေအနေ ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ““မြင်မြင်ချင်းချစ်မိသည်”” ဆိုသည့် အရာမျိုး ရှိသည် ဟု ကျွန်မယုံကြည်ခဲ့သော်လည်း၊ ထိုအချိန်က ကျွန်မသည် အချစ်စိတ်မွှန်နေသော ဆယ်ကျော်သက်တဦး ဖြစ်သောကြောင့် ဂျိုးကိုစတွေ့သောအခါ၊ သူသည်အလွန်ပင်““မိုက်””သည်ဟု ထင်ခဲ့သည်။ သူ့ တွင်ထက်မြက်သော ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေးမျိုး ရှိပြီး နှစ်လိုဖွယ် အလွန်ကောင်းသည်။
သူနှင့်ပထမဆုံးချိန်းတွေ့သောနေ့တွင် ကျွန်မတို့စကားအကြီးအကျယ်ပြောကြပြီး တဦးကိုတဦး အထင်ကြီးစေရန် အပြန်အလှန်ကြိုးပမ်းကြသည်။ တလကြာပြီးနောက် သူနှင့်ထပ်မံတွေ့ဆုံရန် သူကချိန်း ချက်သည်။ ကျွန်မဟာသူ့ကို ဒိတ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကို သူသိခဲ့မယ်လို့ ကျွန်မထင်တယ်။ သူကဒီအချက် ကို ဆုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး အရာရာဟာ လေးလံလာခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ရဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု့ဟာ မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ မစတင်ခဲ့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်မတို့ဟာ တယောက်ကိုတယောက် အထင်ကြီးစေဖို့ ကြိုးပမ်းနေကြခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မဟာ ကျွန်မက လွဲပြီး ဘယ်သူနှင့်မှ သူ့ကို မတွဲစေချင်ဘူး။ အဲ့ဒီအချိန်က ကျွန်မဟာ ကျွန်မရဲ့အဆင့်အတန်းနဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား စံနှုန်းတွေ ကို လျစ်လျူရှုခဲ့တယ်လို မထင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မဟာ သူ့ကို ကျွန်မအားအထင်ကြီးစေဖို့နဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု တခု ကို စတင်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ဟာ ချိန်းတွေ့ခဲ့ကြပြီး အလေးအနက်စကားပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးရန်ဖြစ်တာမျိုးလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ကျွန်မကို ရန်ရှာပြီး အလွန်အမင်း ကျီစယ်ခဲ့ပါတယ်။ သူက အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါ၊ ကျွန်မဟာ ကျွန်မရဲ့ ခံစားချက် တွေကို ဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီး ဟာသအနေနဲ့ ခံယူကာ ရယ်မောဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် ကျွန်မဟာ အမှန်တကယ် နာကျင် ခဲ့ရပါတယ်။ ပါတီပွဲတွေမှာ သူဟာ ကျွန်မကို တဦးတည်းချန် ထားပြီ ထွက်သွားလေ့ရှိခဲ့တယ်။ သူဟာကျွန်မကို အထူးတလည် ဂရုစိုက်တာမျိုး မရှိခဲ့ဘဲ အဲ့ဒါက ကျွန်မကို နာကျင်စေခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး ကျွန်မတို့ရဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုဟာ တဖက်သတ် ဆက်ဆံမှု့မျိုးဖြစ်တာကို နားလည်လာခဲ့ပြီး ကျွန်မ သူ့အပေါ်မှာ ခံစားရသလိုမျိုး ကျွန်မအပေါ်ခံစားလာနိုင်စေဖို့ ကျွန်မဟာပြင်းပြင်း ထန်ထန်စတင်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ ဤသို့လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်မဟာ မိမိကိုယ်ကို ဒုက္ခတွေ့စေခဲ့တယ်။ ကျွန်မဟာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး သူ့ကို ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစေမည့်အရာ တနည်းအားဖြင့် သူလိုချင်တဲ့အရာ မည်သည့်အရာကိုမဆို စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများ အပါအ၀င်ပေါ့။ ကျွန်မက ဤသို့တွေးခဲ့တယ်။ ““ငါသာမလုပ်ပေးရင်၊ သူဟာ အဝေးကို ထွက် သွား လိမ့်မယ်။ ငါသူ့ကို အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူး။””
အချိန်တွေကုန်ဆုံးခဲ့ပြီး ကျွန်မတို့ဟာ အိပ်ရာထဲ အတူဝင်ကြပြီး မမှန်ဘူးဆိုတာ ကျွန်မသိတဲ့အရာတွေကို ပြုလုပ် ခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်မဟာ သူ့ကို ကျွန်မအနားမှာ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား စံနှုန်း တွေကို စွန့်လွှတ်ခဲ့တယ်။ မိန်းမပျိုလေးတဦးလုပ်နိုင်တဲ့ အကြီးအမားဆုံးသောအမှားဟာ ဒီအမှားပါပဲ။ သူမဟာ ယောက်ျား တဦး လုပ်စေလိုတဲ့အရာတွေကို ဆက်ပြီးပြုလုပ်နေမည် ဆိုပါက၊ သူဟာ သူမအပေါ်အရူးအမူးဖြစ်လာမည်ဟု ထင်လေ့ ရှိသည်။ သို့သော် ဤအရာသည် မမှန်ကန်ပါ။
ဂျိုးဟာ ကျွန်မအပေါ် ရိုသေလေးစားမှု့မရှိတော့တာကို ကျွန်မသိခဲ့ပြီး ကျွန်မအပေါ်ကျွန်မရိုသေ လေးစားမှု့များစွာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဟာ ဆိုးရွားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ခရစ်ယာန်မိသားစုနောက်ခံကြောင့်ကျွန်မဟာ ကျွန်မရဲ့ အပြစ် တွေမှာ အကြိမ်တရာမက သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်ဘုရားသခင်အား ““ခွင့်လွှတ်ပါအရှင်””ဟု မပြောနိုင်ခဲ့ပါ။ အကြောင်း မှာ ထိုအရာတွေကိုဆက်လုပ်နေမိမှာကို ကျွန်မသိတဲ့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့အတွက် ဘာကိုမဆို ကျွန်မ လုပ်လိုခဲ့တယ်။
ဤနေရာ၌ ကျွန်မ မိန်းမပျိုလေးတွေကို ပြောလိုသည်မှာ တဦးဦးနှင့်ဒိတ်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပါက သူဟာ ခရစ်ယာန် ဖြစ်သည်ဟု သင်သိထားသောလူကိုရှာပါ။ ““ကျွန်တော်ဟာ ခရစ်ယာန်တဦးဖြစ်ပြီး ကျွန်တော့်မှာ ကိုယ်ကျင့်တရားစံနှုန်း တွေ့ရှိတယ်””ဟု ရဲဝံ့စွာပြောနိုင်သော လူစားမျိုးဖြစ်သင့်သည်။ ရုိုင်းစိုင်းသော လူစားမျိုးတွင်ပါဝင်ပြီး ခရစ်ယာန် မဟုတ်သောသူများကို ဒိတ်လုပ်ခြင်းသည် အရဲစွန့် ရဲဝံ့စွာလုပ် ဆောင်သော ကိစ္စမျိုးဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုသို့သော ယောက်ျားမျိုးနှင့်ဝေးရာတွင်နေပါ။ အကြောင်းမှာ သင့်ထံမှ အဖိုးထိုက်သောအရာတခုခုသည် သူတို့နှင့်ဆက်ဆံနေတုံး ဆုံးရှုံး သွား နိုင်တယ်။
ဂျိုးနှင့်ကျွန်မဟာ ချိန်းတွေ့နေစဉ်ကာလအတွင်း ပြဿနာများစွာတက်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ မကြာခဏ ရန်ဖြစ် ခဲ့ ကြတယ်။ သူဟာကျွန်မကို တမင်တကာရန်ရှာခဲ့ပြီး ကျွန်မဟာအမြဲတစေ နာကျင်ခဲ့ရတယ်။ သူနှင့်အတူ အိပ်တဲ့ အတွက် ကျွန်မမှာအပြစ်ရှိတယ်လို့ ခံစားရတာကို သူ့ကိုရှင်းပြဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး ရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် သူက လက်မခံ ခဲ့ဘူး။
ကျွန်မဟာ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို ဝေဖန်သုံးသပ်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ ခပ်ပြတ်ပြတ် ပြောရရင်တော့ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ ““ပုပ်စပ်””ခဲ့တယ်။ သူဟာကျွန်မကို ကောင်းကောင်း မဆက်ဆံ ခဲ့ပါဘူး။ သို့သော် ကျွန်မရဲ့ အခြားစိတ်တစ်စိတ်က ဤသို့တွေးခဲ့တယ်။ ““အကယ်၍၊ ငါတို့သာ လက်ထပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် အရာရာဟာ ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ သူဟာငါ့ကို ချစ်လာပြီး စောင့်ရှောက်လိမ့်မည်။”” ဤသို့တွေးခြင်းသည် ကျွန်မ အတွက် အကြီးအကျယ်မှားခဲ့သည်။ သင်ဟာသင့်ကို ချစ်စေဖို့အတွက် လူတဦးကို ပြောင်းလဲလာအောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ သင်ဟာ မည်မျှ ကြိုးစားသည်ဖြစ်စေ၊ မည်မျှ သူတို့အားချစ်သည်ဖြစ်စေ၊ သူတို့ဟာ သင့်ကိုချစ်စေဖို့အတွက် သူတို့အား ပြောင်းလဲ လာအောင် မလုပ်နိုင်ပါ။
သင်သည် ရည်းစားဘ၀ကာလအတွင်း၌ သင်တို့၏ဆက်ဆံမှု့ကို ဆယ်ကြိမ်မက၊ အကြိမ် ၂၀ မီးမောင်း ထိုးကြည့် နိုင်သည်။ သင်တို့၏အိမ်ထောင်ရေးဘ၀မှာလည်း ရည်းစားဘ၀ကာလအတွင်း၌ ဆက်ဆံမှု့ကဲ့သို့ပင် ဖြစ်လိမ့်မည်။ တီဗွီ၊ စာအုပ်များ၊ ရုပ်ရှင်များနှင့် သီချင်းများက သင်သည်မျက်စိ တမှိတ်အတွင်း၌ပင် အရာအားလုံးတို့ကို ပြီးပြည့်စုံ သွားအောင် မှော်ဆန်ဆန်လုပ်နိုင်သည်ဟု ထင်စေလေ့ ရှိသည်။ တဦးကိုတဦးချစ်ပြီး မိမိတို့၏အိမ်ထောင်ရေး တည်မြဲအောင် လုပ်နေသူတို့အတွက်ပင်လျှင် အိမ်ထောင်ရေးဘ၀သည် ခက်ခဲသည်။
ကျွန်မသည် ကျွန်မနှင့်ဂျိုးတို့၏ရည်းစားဘ၀ကို ဆယ်ကြိမ်(သို့) ငါးကြိမ်ခန့် မီးမောင်းထိုးကြည့် ပါက အနာဂတ် တွင် ဂျိုးကကျွန်မအားစွန့်ခွာသွားမည်ကို ကျွန်မသိကောင်းသိခဲ့လိမ့်မည်။ သူသည် အနာဂတ်တွင် အခြား မိန်းမများနှင့် တွဲခုတ် လိမ့်မည်။ ကျွန်မအပေါ်တွင် ဒေါသအိုးပေါက်ကွဲလိမ့်မည်။ ကျွန်မကိုရိုက်နှက်လိမ့်မည်။ သူက ကျွန်မအား မိမိမယားကဲ့သို့ ဆက်ဆံလိမ့်မည်မဟုတ်ဘဲ ယောက်ျားတဦး၏တာဝန်များကိုလည်း သူ ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါတွေ အားလုံးကို ကျွန်မ သိခဲ့ကောင်းသည်။
သို့သော် ကျွန်မသည် သူနှင့်လမ်းမခွဲခဲ့ပါ။ ကျွန်မအချိန်မဆွဲတော့ဘဲ သူနှင့်ခိုးပြေးကာလက်ထပ် လိုက်သည်။ သူနှင်ခိုးပြေးပြီး လက်ထပ်ခဲ့ခြင်းအတွက် ကျွန်မသည် မိမိကိုယ်မှလွဲ၍ မည်သူ့ကိုမျှအပြစ် မတင်ခဲ့ပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဤသို့မလုပ်သင့်ကြောင်းကို ကျွန်မသိခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အဲ့ဒီအချိန်ကာလကလေး၌ ကျွန်မဟာ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး တွေးတောမနေတော့ဘဲ ဆုံးဖြတ်ချက်တခုကို အလျင်အမြန်ချခဲ့သည်။ ကျွန်မဟာသူနှင့်လက်မထပ်ပါက သူ့ကိုဆုံးရှုံးရတော့မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ကျွန်မဆုံးဖြတ်သင့်ခဲ့သည့်အရာမှာ သူဟာ ကျွန်မ အဆင်သင့် ဖြစ်သည့်အချိန်ကို မစောင့်ပါက၊ သူနှင့်လက်ထပ်ရန် ကျွန်မအတွက် မထိုက်တန်ပါဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့သင့်သည်။ သို့သော် ကျွန်မ၏စိတ်ခံစားမှု့ များသည် လုံးဝဥဿုန်ထိန်းချုပ်ထားခြင်းကို ခံရပြီး ကျွန်မ၏တွေးခေါ်မှု့ပုံစံမှာလည်း ရှင်းရှင်း လင်းလင်း မရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်မဟာအလွန်ပင် စိတ်ရှုပ်ထွေးနေခဲ့ပြီး မနာကျင်လိုခဲ့ပါ။
ဤအိမ်ထောင်ရေးဘ၀ဟာ ကျွန်မဘ၀မှာ နာကျင်ဖွယ်အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်လာမည်ကို မသိရှိ ခဲ့ဘဲလျက်၊ ကျွန်မဟာ အိမ်ထောင်ရေးဘ၀အတွင်းသို့ ခုန်ဝင်ခဲ့သည်။
ကျွန်မတို့ဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့မိဘတွေကို ဒီအကြောင်းအားပြောပြသည့်အခါ၊ သူတို့ဟာ အလွန်နာကျင်ပြီး၊ စိတ်ပျက် ကြ ပါတယ်။ ဂျိုးကောလိပ်တက်နိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်မဟာ ကျောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မဟာ ရနိုင်တဲ့ အလုပ် မှန်သမျှကို လုပ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မဟာ စားပွဲထိုးအဖြစ်လုပ်ခဲ့ပြီး ညဘက်မှာယမကာဆိုင်မှာ လည်းလုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီ အလုပ်က တော်တော် ဆိုးပါတယ်။ အရောင်းဝန်ထမ်းအဖြစ်လည်း လုပ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မတို့နှစ်ဦး ရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်မဟာ ဘာကိုမဆို လုပ်ခဲ့တယ်။
ကျွန်မတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဘ၀ဟာ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ သူကကျွန်မကိုမချစ်ပါဘူး။ တကယ်တမ်းကျတော့ ကျွန်မ ကသာ သူ့ကိုချစ်နေပြီး သူကကျွန်မကိုချစ်လာဖို့အတွက် ကြိုးစားနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ သူကို ကျေနပ်နှစ်သက် စေဖို့ အတွက် ကျွန်မရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်တွေကို စွန့်လွှတ်ပူဇော်ခဲ့တာတောင် မှ ဘာမှ မထူးခြားလာခဲ့ပါဘူး။ မထူးခြား နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ သင်ဟာတဦးဦးအား သင့်ကိုချစ်လာအောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ သူတို့က သင့်ကိုချစ်ရင်ချစ်မယ်။ မချစ်ရင် မချစ်ဘူး။ သူဟာကျွန်မကိုစွန့်ခွာပြီး အသစ် တစ်ယောက်ရှာသွားမှာကို ကျွန်မဟာအဆက်မပြတ် ထိတ်လန့် နေခဲ့ရပါ တယ်။ သူကလည်း အဲ့ဒါကိုပဲ သေချာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မဟာ အဲ့ဒီအချက်ကို လက်မခံချင်ခဲ့ဘူး။ အကြောင်းမှာ ကျွန်မဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို အလုပ်လုပ်စေချင်လို့ပဲဖြစ်တယ်။
ကျွန်မတို့လက်ထပ်ပြီးနောက် ၅လအကြာမှာ ကျွန်မဟာ ကိုယ်ဝန်ရှိလာပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေးတဦးကို မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီကစ္စကအခြေအနေတို့ကို ခဏတဖြုတ်အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ သူဟာခလေးငယ်ကို ရရှိခဲ့ခြင်း အတွက် အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်။ သို့သော်ကလေးရပြီးတလ အကြာမှာတော့ အရာရာဟာ အရင်အတိုင်း ပြန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူဟာအရင်အတိုင်း ဒေါသအိုးပေါက်ကွဲ နေလေ့ရှိပြီး သမီးလေးကိုကျွန်မနဲ့ပဲ တချိန်လုံး ချန်ထားပြီး ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး ကျွန်မချည်းပဲ ထမ်းစေခဲ့သည်။ ကလေးငယ်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့နဲ့ မိသားစုကိုထောက်ပံ့ဖို့တာဝန်ကို ကျွန်မ ကပဲ ယူခဲ့ရတယ်။
သူဟာကျွန်မကို မချစ်ကြောင်း၊ ဘယ်တော့မှလည်းချစ်လာမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ သူဟာအဖေကောင်း တဦး လည်း မဟုတ်ကြောင်းနှင့် တာဝန်သိတတ်တဲ့ခင်ပွန်းလည်းမဟုတ်ကြောင်းကို သူနှင့်လက်ထပ် ပြီးသုံးနှစ်အကြာမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အရာတွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်မနားလည်လာခဲ့တယ်။ ကျွန်မဟာ နောက်ထပ် တောင့်မခံ နိုင်တော့ဘဲ သူနှင့် ကွာရှင်း ခဲ့တယ်။
ကျွန်မဟာ ကျွန်မဘ၀ကို ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့အခါ၊ ဘယ်နေရာမှာ ကျွန်မအမှားတွေလုပ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာကို သိမြင် ခဲ့တယ်။ ကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးအမှားကတော့ ကျွန်မဟာဘုရားသခင်နှင့် ပုံမှန်မိတ်သဟာယ ကိုလက်မခံခဲ့၊ မထိန်းသိမ်း ခဲ့ခြင်း ပဲ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မဟာ အဲ့ဒါကိုလုပ်ခဲ့ပါက၊ ဒီလိုအခြေအနေအတွင်းသို့ ကျရောက်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။ ဘုရားသခင်ရဲ့ မေတ္တာတော်ဟာ အခမဲ့ဖြစ်ပြီး သူရဲ့မေတ္တာဟာပြီးပြည့်စုံတာကြောင့် သူ့လိုမေတ္တာမျိုးကို သင့်ဘ၀တလျှောက်လုံးမှာ မည်သူ ဆီကမှ သင်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားသခင်က သင့်ကိုပေးနိုင်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုးမှာ ချွတ်ယွင်းချက် လုံးဝမရှိပါဘူး။ ချစ်ခြင်း မေတ္တာမရှိဘဲနဲ့ သင်အသက်ရှင်နိုင်တယ်လို့ သင်ဘယ်တော့မှမယုံကြည်ပါနဲ့။ အကြောင်းကတော့ သင်ဟာ အသက်မရှင်နိုင်ပါဘူး။ ထိုသို့သောမေတ္တာမျိုးကို ဘုရားသခင်မှလွဲ၍ သင့်ဘေးနားရှိ မည်သူ့ထံကမှ ရနိုင်ဖို့မမျှော်လင့်နိုင်ပါဘူး။ သူဟာ ထိုနေရာတွင်ရှိပြီး ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲပါ။
အခြားအမှားတစ်ခုကတော့ အလျင်စလိုအစပြုခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ ယနေ့မှာ ဤအရာကိုလူအတော် များများက လုပ်လို ကြတယ်။ သင်က ““ဟုတ်ပြီ။ သူကငါ့ကိုကြိုက်တယ်။ ငါကလည်းသူ့ကို ကြိုက်တယ်။ ဒါကြောင့် ငါတို့ဟာ တဦးကို တဦး ချစ်နေကြတာပဲ။ ငါတို့တစ်ဆင့်တိုးပြီး ငါတို့နှစ်ဦးအတွက် လိင်ကိစ္စ ဟာဘယ်လို အလုပ်လုပ်မလဲဆိုတာ ကြည့်ကြတာ ပေါ့။””ဟု တွေးလိမ့်မည်။ ဤသို့တွေးခြင်းသည် သင်တို့၏သူငယ်ချင်းကောင်းဘ၀ကို ကျော်ပစ်လိုက်ခြင်း ပင် ဖြစ်သည်။ ကျွန်မနှင့်ဂျိုး၏ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု့၌ ပျောက်ဆုံးနေသောအရာမှာ ထိုအရာပင်ဖြစ်သည်။ သူနှင့် ကျွန်မကြား၌ ရိုသေ လေးစားမှု့ မရှိသလို သူငယ်ချင်းစိတ်ဓါတ်လည်း မရှိပါ။ သူကကျွန်မကို မလေးစားသလို ကျွန်မကလည်း သူ့ကို မလေးစားပါ။ သူငယ်ချင်းစိတ်ဓါတ်ဟာ ကျွန်မတို့နှစ်ဦးလုံး၌မရှိခဲ့ပါ။
နောက်ထပ်အမှားတစ်ခုကတော့ လုပ်စရာအကြောင်းမရှိဘဲ လိင်ကိစ္စကိုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်မဟာ လက် မထပ် ရသေးပါ။ ကျွန်မဟာ လိင်ဆက်ဆံမှု့အတွက် ဖြစ်ပေါ်လာမည့်အကျိုးဆက်တွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ မရင့်ကျက် သေးသလို အသက်လည်းကြီးသင့်သလောက် မကြီးသေးပါ။ တစုံတဦးနှင့် လိင် ဆက်ဆံဖို့အတွက် သင့်မှာခန္ဓာပိုင်းအရ အဆင်သင့် ဖြစ်နေခြင်းက ဆက်ဆံဖို့အတွက် သင့်ဘက်မှလုံးဝ ဥဿုန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ လိင် ဆက်ဆံခြင်း သည် ခန္ဓာပိုင်းလုပ်ဆောင်မှု့တစ်ခုသာမဟုတ်ဘဲ သင်စိတ်ခံစားမှု့အားလုံးလည်း ဤကိစ္စ၌ ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်။ သင်သည် အဆင်သင့် မဖြစ်သေးဘဲ ဤကိစ္စကိုလုပ်ပါက သင်ဟာသင်၏စိတ်ခံစားမှုအားလုံးကို ရှုပ်ထွေးသွားစေနိုင်သည်။ လိင် ကိစ္စဟာ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀အတွက်သာ သီးသန့်ဖယ်ထားသင့်တဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုတစ်ခု၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုကြည့်ပါက၊ သင်ဟာပထမဆုံး သူငယ်ချင်းဘ၀ အားဖြင့် စတင် သင့်ပြီး သင်တို့နှစ်ဦးလုံးက ခရစ်ယာန်ဖြစ်သည်ကို သင်သိမြင်လိမ့်မည်။ ယင်းသူငယ်ချင်းဘ၀မှ ရိုသေလေးစားမှု့နှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ထို့နောက်ဘုရားသခင်က ထိုမေတ္တာကို ကြာရှည်စွာထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ ကူညီ ပေးသည်။ အဲ့ဒီကနေပြီ သင်ဟာအလေးအနက် ထား၍ ချိန်းတွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှ လက်ထပ်နိုင်သည်။
ဤအမှန်အကန်အဖြစ်အပျက်ကို ရေးသားသူသည် အချစ်ကိုရှာနေခဲ့သည်။ တစုံတဦးကိုသင့်အား ချစ်စေလိုပြီး သင့်ကလည်းပြန်ချစ်လိုခြင်းသည် သဘာဝသာဖြစ်သည်။ လူငယ်လူရွယ်အတွက် ဤအချက် သည်ပို၍မှန်သည်။
သင်ဟာအထက်တန်း(သို့)ကောလိပ်တက်နေပါက ဖြစ်နိုင်ချေမှာ သင်ဟာ ယခုမှန်ကန်သော တစုံတဦးနှင့် ချစ်ကြိုက် နေသည် (သို့) ချစ်ကြိုက်နိုင်လိမ့်မည်ဟု သင်ထင်လိမ့်မည်။ သို့သော် အချစ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မှားယွင်းစွာ တွေးခေါ်မှု့ များစွာ ရှိသည်။
လူများစွာသည် စစ်မှန်သောအချစ်နှင့်တပ်မက်စွဲလမ်းခြင်းကို ရှုပ်ထွေးကြသည်။ အခြားတို့က ““မြင်မြင်ချင်း အချစ်”” သည် စစ်မှန်သောအရာဖြစ်သည်ဟု ထင်ကြသည်။ အခြားသူတို့က အချစ်နှင့် ရမ္မက် အကြား (သို့) အချစ်နှင့် လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ဆွဲဆောင်မှု့များအကြားရှိ ကွဲပြားမှု့ကို မသိရှိကြပါ။
တပ်မက်စွဲလန်းခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း? ထိုအရာကသင့်အပေါ်တွင် မည်သို့အကျိုးသက် ရောက်မှု့ ရှိ သနည်း? အချစ်နှင့်ရမ္မက်အကြားရှိ ကွာခြားမှု့မှာ အဘယ်နည်း? လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွဲဆောင်မှု့ ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း? စစ်မှန်သောအချစ်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း? ဤအရေးကြီးသောမေးခွန်းများ ကိုစဉ်းစားကြပါစို့။
တပ်မက်စွဲလန်းခြင်းဆိုသည်မှာ တစုံတဦး၏ဆွဲဆောင်မှု့ကြောင့် စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်ဖြစ်သွားခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ အဘိဓါန်က ဤအရာကို ““အရူးအမူးချစ်ကြိုက်နေခြင်း””ဟု ပြောသည်။ တနည်းအားဖြင့် သင်ဟာ ထိုဆွဲဆောင်မှု့ကြောင့် စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်ဖြစ်သွားပြီး ကိုယ်ဘာလုပ်နေသည်ကိုပင် မသိတော့ခြင်း ဖြစ်သည်။ တပ်မက်စွဲလန်းခြင်းသည် စစ်မှန်သော အချစ် မဟုတ်ပါ။
ဤသို့သော တပ်မက်စွဲလန်းမှုမျိုးရှိနေသူတဦးသည် သူချစ်ကြိုက်နေသောသူမှလွဲ၍ အခြား မည်သည့်အရာ၊ မည်သူကိုမှ အများအားဖြင့် မမြင်တော့ပါ။ တပ်မက်စွဲလန်းခြင်းသည် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် အတွေ့အကြုံတခုဖြစ်ကာ စိတ်ပိုင်းအရ မြင့်တက်နေခြင်းဖြစ်သော်လည်း ကြာကြာမခံပါ။ အကြောင်းမှာ စစ်မှန်သော အချစ်မဟုတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
အရူးအမူးစွဲလမ်းခြင်း၏ လက္ခဏာတစ်ခုမှာ သင်ချစ်ကြိုက်နေသည်ဟု သင်ထင်သောသူအား ဘုရားတစ်ဆူကဲ့သို့ ကိုးကွယ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သူပြောသမျှ၊ လုပ်သမျှအရာအားလုံးသည် သင့်အဖို့ ပြီးပြည့်စုံလှသည်ဟု ထင်ရသည်။ သင်သည် သူ၏အပြစ်အနာအဆာများကို မမြင်တော့ပါ။ အခြားလူများ က ထိုသူ၌ “အန္တရာယ်ရှိသောလက္ခဏာ” များစွာကို မြင်နိုင်သော်လည်း သင်မှာမူ မျက်မမြင်ဆန်ဆန် အရူးအမူးစွဲလမ်းနေသောကြောင့် ဘာကိုမှမမြင်တော့ပါ။ သင်၏ အချစ်စိတ်သည် သင့်ကိုလွှမ်းခြုံသွားသောကြောင့် သင်သည် သင်၏သာမန်အသိတရားကို အသုံးမပြုနိုင်တော့ပါ။ သင်သည် တစုံတဦးအား အရူးအမူးစွဲလမ်းနေပါက၊ သင်ဟာဖရိုဖရဲဖြစ်နေလေ့ရှိပြီး စိတ်နှင့်ကိုယ် မကပ်တော့ပါ။ သင်သည် တာဝန် သိစိတ်ကင်းမဲ့သွားပြီး မိမိ၏တာဝန်များကိုပင် လျစ်လျူရှုလေ့ရှိသည်။
တခါတရံလူငယ်များသည် သူတို့၏တာဝန်များကိုမလုပ်ပဲ လဲလျောင်းကာ စိတ်ကူးယဉ်ကြမည် ဖြစ်သည်။ တစုံတဦးက “ကယ်ရိုလိုင်း၊ နင်ဘာဖြစ်နေတာလဲ။ နင်စိတ်နဲ့ကိုယ်မကပ်သလိုပဲ” ဟုမေးသော အခါ ကယ်ရိုလိုင်းက ချိုသာစွာပြုံးလျက် “အိုး..ငါအချစ်ကိုတွေ့နေပြီ။” ဟုပြန်ဖြေလိမ့်မည်။ မဟုတ်ပါဘူး။ သူမဟာ အရူးအမူး စွဲလမ်းနေခြင်း သာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သူမသာ တစုံတဦးအား အမှန်တကယ် ချစ်ကြိုက်နေပြီး သူမ၏အချစ်ကသာ စစ်မှန်ပါက၊ သူမဟာ သူမရဲ့ အနာဂတ် အတွက် ပြင်ဆင် အစီအစဉ် ချနေမည်ဖြစ်ပြီး သူမ၏တာဝန်များကိုလည်း အလေးထား၍ လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်သည်။
အရူးအမူးစွဲလမ်းခြင်း အများစုသည် ကြာရှည်မခံပါ။ အရူးအမူးစွဲလမ်းချိန်ကာလအတွင်း၌ မှားယွင်းစွာ လုပ် ဆောင်မှုများ၏ ခါးသီးသောအသီးများကိုသာ သီးစေလေ့ရှိသည်။ သင်ဟာအရူးအမူးစွဲလမ်းနေပါက၊ သင်၏သာမန် အသိ တရား ကို သင်အသုံးမပြုတော့ပါဆိုသည့်အချက်ကို သတိရပါ။ သင်၏စိတ်ခံစားချက်များသည် ထိန်းချုပ်ထားခြင်းကို ခံနေ ရသည်။ သင်သာ ဤသို့ဖြစ်နေပါက၊ သင့်ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး၌ သင်နောင်တရမည့် ကိစ္စများကို သင်ပြုလုပ်မိ နိုင်သည်။
Debbie သည် Larry အား အရူးအမူးစွဲလမ်းနေခဲ့သည်။ သူသည် ချောမောပြီး ဘောလုံးကစားသမား တဦး ဖြစ်နေသည်ဆိုသည့်အချက်က သူမအား သာ၍စွဲလမ်းစေသည်။ တစ်နေ့တွင် သူမအိပ်မက်မက်နေသောအရာသည် လက်တွေ့ဖြစ်လာခဲ့သည်။ လယ်ရီက သူမနှင့်ဒိတ်လုပ်ရန် သူမအား ဖုန်းဆက်ခဲ့သည်။ သူမသည် အကြီးအကျယ် စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။
သူရောက်လာပြီးနောက် သူမက သူတို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဟု မေးသောအခါ သူက မတိမကျ အဖြေ ကိုသာ ပြန်ပေးသည်။ သူတို့သည် လူသူကင်းမဲ့သောနေရာတစ်ခုသို့ မောင်းထွက်ခဲ့ပြီး ကားကိုပါကင်ထိုး လိုက်သည်။ သူက သူမအား မည်မျှချစ်ကြောင်းကိုပြောသည်။ အခြေအနေတို့သည် အထိန်းအချုပ်မဲ့မသွားစဉ်တွင် သူမသည် သူ့အား မတားဆီးခဲ့ပါ။ သူမက “ဒီအတွေ့အကြုံလေးက ငါ့ကိုထိခိုက်စေမှာမဟုတ်ပါ ဘူး။” ဟုတွေးခဲ့လေသည်။ ဤအတွေ့ အကြုံလေးက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စအားလုံးပါဝင်သော အတွေ့အကြုံ ကြီးဖြစ်သွားခဲ့သည်။
နောက်ပိုင်းတွင် Debbie က ဤသို့ပြန်ပြောသည်။ ““ဒါဟာ အရမ်းကိုဆိုးရွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မဟာ အလွန်ကို ကြောက်ရွံ့နေခဲ့ပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကများ ကျွန်မတို့ကိုမြင်သွားပါက၊ ဘာဖြစ်သွား မည်နည်း ၊ မိနစ် အနည်းငယ် အတွင်း ကျွန်မဟာ အ၀တ်အစားပြန်ဝတ်လိုက်ပြီး ကျွန်မအပေါ်ဂရုမစိုက်တဲ့ ယောက်ျား၊ ကျွန်မကလည်း ဂရုမစိုက်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက် ကျွန်မရဲ့ အဖိုးထိုက်တဲ့အရာ တစ်ခုကိုစွန့်ပစ်မိခဲ့တဲ့အတွက် မိမိကိုယ်ကို မုန်းတီး ခဲ့ပါတယ်။
ရမ္မက်ဆိုသည်မှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာသီသကို ဖြည့်ဆည်းလိုသောပြင်းပြသည့်စိတ်အလိုပင် ဖြစ်သည်။ ရမ္မက် အား အချစ်နှင့်မကြာခဏပူးတွဲဖော်ပြလေ့ရှိသော်လည်း ရမ္မက်နှင့်အချစ်သည် လုံးဝ ကွဲပြားသောအရာ နှစ်ခု ဖြစ်သည်။
ရမ္မက်သည် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သည်။ ရမ္မက်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ တစုံတခုအား ရလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ရမ္မက်သည် သူ့အား အလျင်အမြန်ကျေနပ်စေခြင်းကို လိုလားသည်။ ရမ္မက်က ““အဲဒါကို ငါ့ရဲ့ပျော် ရွှင်ကျေနပ်မှုအတွက် လိုချင်တယ်။ အကျိုးဆက်တွေက ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲ့ဒါကို ငါအခုလိုချင်တယ်။””
အချစ်သည် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းကင်းမဲ့သည်။ အချစ်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ပေးဆပ်လိုခြင်းဖြစ်သည်။ အချစ်က စောင့်ဆိုင်းလိုသည်။ စစ်မှန်သောအချစ်သည် မှန်သောအချိန်နှင့် မှန်သောအခြေအနေတို့ကို စောင့်ဆိုင်း လိမ့် မည်။
ကျမ်းစာက ရမ္မက်နှင့်အချစ်နှစ်ခုစလုံးအကြောင်းကို ဥပမာပေး၍ ပြောပြထားသည်။ ဒါဝိဒ်၏ သားတစ်ဦးဖြစ်သူ အာမနုန်က သူသည်သူ၏ညီမ၀မ်းကွဲ တာမာနှင့်အရူးအမူးချစ်ကျွမ်းဝင်နေသည် ဟုထင်ခဲ့သည်။ သူသည် သူမအား အလွန်တပ်မက်သဖြင့် နာဖျားပင်နာဖျားခဲ့သည်။ သူ၏မိတ်ဆွေဆိုးများထဲမှ တစ်ဦးက အာမနုန်အား သူ့ညီမတာမာနှင့် နှစ်ဦးတည်း ရှိနေနိုင်မည့် အစီအစဉ်တစ်ခုကို အကြံပေးတင်ပြ ခဲ့သည်။ အာမနုန်သည် ဤအစီအစဉ်ကို အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ပြီး သူ့ညီမ တာမာအား အလိုမတူ လိင် ဆက်ဆံခဲ့သည်။
နောက်ဘာဆက်ဖြစ်မည်နည်း။ သူသည် သူမအား ဂရုမစိုက်တော့ပါ။ အမှန်မှာ သူသည်သူမအား မုန်းတီးခဲ့သည်။ အာမနုန်၏အချစ်မှာ မစစ်မှန်ခဲ့ပါ။ ရမ္မက်သာဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်၌ ကျမ်းစာက ရာခေလအပေါ်တွင်ထားသော ယာကုပ်၏မေတ္တာအကြောင်းကို ပြောပြထားသည်။ ယာကုပ်သည် ရာခေလအားရရှိရန်အတွက် ရာခေလ အဖေထံတွင်(၇)နှစ်ကြာ အလုပ် လုပ်ခဲ့သည်။ သူမအပေါ် တွင် ထားသော သူ၏မေတ္တာကြောင့် ကြာရှည်သော(၇)နှစ်တာကို ရက်အနည်းငယ် ကဲ့သို့ ယာကုပ်ကထင်သည် ဟု ကျမ်းစာက ရေးထားသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုသည် ယောက်ျားတစ်ဦးနှင့် မိန်းမပျိုတစ်ဦးကြားတွင် ရှိသောအရာ ဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်ကို စိတ်ဝင်စားစေသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုအားဖြင့် ကျွန်ုပ် တို့ကို တည်ဆောက် ထားသည်။ ဤသို့ စိတ်ဝင်စားခြင်းသည် မမှားသလို အပြစ်မရှိပါ။ ဘုရားသခင်က ဤနည်းအတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖန်ဆင်းထားသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ မှားသောနည်းလမ်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ပိုင်းအရ လှုံ့ဆော်မှုကို ကျေနပ် စေ သော အခါတွင်မူ အပြစ်ဖြစ်လာသည်။
တစုံတဦးအား လိင်ပိုင်းအရ စွဲမက်နေခြင်းက သင်သည် သူနှင့်ချစ်ကျွမ်းဝင်နေသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ပုရိသ ယောက်ျား တဦး က ကိုယ်လုံးကိုယ်လုံးပေါက်လှသော မိန်းမတဦးကိုမြင်ပြီး ““အားပါးပါး””ဟု ပြော လိမ့်မည်။ မိန်းမပျိုလေးတဦးက ရုပ်ဖြောင့်သောဘောလုံးသမားတဦးကို မြင်သောအခါ သူမ၏ရင်ခုန် သံများ စည်းချက်မှားသွားသည်။ အဲ့ဒါဟာ အချစ်လား? မဟုတ်ပါ။ ယောက်ျားနှင့် မိန်းမကြားထဲတွင် ရှိသော ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုသာ ဖြစ်သည်။
ရုပ်ရှင်များ၊ တီဗွီများ၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့် စာအုပ်များက ဤအတွေးအခေါ်မျိုးအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို တရစပ် ပစ်ခတ်သည်။ ““သင့်ကို စွဲမက်နှစ်သက်သောသူတဦးကို ရှာပါ။...လိင်ကောင်းကောင်းဆက်ဆံနိုင်သော ဘ၀မျိုး ရလျှင် အရာအားလုံးဟာ ပြီးပြည့်စုံလိမ့်မည်။”” ကျောင်း၏အလှဘုရင်မသည် ဘောလုံးအသင်း၏ကပ္ပတိန်ဟောင်းကို လက်ထပ် လိုက်သောအခါ၊ လူတိုင်းကက သက်ပြင်းချ၍ ““လိုက်ဖက်လိုက်တဲ့ စုံတွဲ ပါလား”” ဟုမှတ်ချက်ချသည်။ သို့သော် ခဏကြာပြီးနောက်၊ သူတို့၏အိမ်ထောင်ရေးသည် ပြိုကွဲသွားသည်။ ဘာကြောင့်နည်း။ အကြောင်းမှာ စစ်မှန်သော မေတ္တာသည် သူတို့နှစ်ဦး၌ မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် တဦးကိုတဦး လိင်ပိုင်းအရ စွဲမက်ကြသော်လည်း၊ အဲဒါက လွဲ၍ အကြိုက် တူသောအရာများ သူတို့ တွင်မရှိပါ။ မကြာမီ သူတို့သည် တဦးကိုတဦးငြီးငွေ့လာကြသည်။
လိင်ပိုင်းအရ ဆွဲဆောင်မှုသည် စစ်မှန်သောအချစ်မဟုတ်ပါ ဆိုသည့်အချက်ကို သတိရပါ။ လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အပြန်အလှန် စွဲမက်မှုသည် အိမ်ထောင်ရေး၌အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်ဖြစ်သော်လည်း ဤစွဲမက်မှု တခု တည်း ၌သာ အိမ်ထောင်ရေးကိုမတည်ဆောက်နိုင်ပါ။ လက်မထပ်မီကာလအတွင်း လိင်ပိုင်း အရပါဝင်ပတ်သက်မှုကို မတား ဆီးနိုင်၊ မတားဆီးခဲ့မိသော စုံတွဲထောင်ပေါင်းများစွာရှိသော်လည်း ယခုတွင်မူ တဦးကိုတဦး ထိချင်းကိုပင်လျှင် မခံစားနိုင် တော့ပါ။
စစ်မှန်သောအချစ်တွင် အရည်အသွေးများစွာရှိသည်။ သာမန်အားဖြင့် အချစ်တွင် မှော်ဆန်သော ခန္ဓာပိုင်း အရ စွဲမက်မှုပါဝင်သော်လည်း၊ အဲဒီပါဝင်မှုထက်များစွာ အဓိပ္ပာယ်လေးနက်သည်။ အချစ်သည် သူငယ်ချင်းဘ၀၌ မြစ်ဖျား ခံသည်။ သင်ဟာ ထိုလူတကိုယ်လုံးကို စစ်မှန်သောအချစ်အားဖြင့်ချစ်နိုင်သည်။ သင်သည် ထိုလူနှင့်အတူ ရှိရခြင်း၌ ၀မ်းမြောက်ပြီး ထိုသူနှင့်ဝေမျှခံစားရခြင်း၌လည်း ၀မ်းမြောက်သည်။
ဤအချစ်သည် သူချစ်သောသူအတွက် ပေးဆပ်လိမ့်မည်။ အချစ်နှင့်အတူ အဓိကအရည်အသွေး တစ်ခုဖြစ်သည့် ဆပ်ကပ်အပ်နှံခြင်းလည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ပြဿနာများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါ၊ ဤ အချစ်က အရှုံးမပေး၊ ဒူးမထောက် ပါ။ စစ်မှန်သောအချစ်က သင့်အတွင်းအကောင်းဆုံးအရာများကိုသာ ဖြစ်စေသည်။
သင်သည် သင်ချစ်သောသူက သင့်အတွက် ဂုဏ်ယူစေလိုသည်။ အကယ်၍ သင်သည် တစုံတဦး အား အရူးအမူး စွဲလမ်းပါက၊ သင်သည် ဟိုလှဲဒီလှဲလုပ်၍ စိတ်ကူးယဉ်နေမည်ဖြစ်သော်လည်း၊ သင်၏အချစ်သာ စစ်မှန်ပါက၊ သင်သည် အလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်၍ အစီအစဉ်များဆွဲကာ၊ အနာဂတ်အတွက် ပြင်ဆင် နေမည်ဖြစ်သည်။
စစ်မှန်သောအချစ်ဟူသည်မှာ သင့်ကိုရုတ်တရက်ရိုက်ခတ်လာသော စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ခံစားချက်မျိုး မဟုတ်ပါ။ ဤအချစ်သည် ကြီးထွားလာရန်နှင့် တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာရန်အတွက် အချိန်လိုအပ်သည်။ ကမ္ဘာဂီတ၏ လူကြိုက်များ သောသီချင်းအချို့က တစုံတဦးနှင့်မြင်မြင်ခြင်းချစ်မိခြင်းသည် စစ်မှန်သော အချစ်ဖြစ်သည်ဟု မှားယွင်းစွာ ထင်မြင်စေလေ့ ရှိသည်။
စစ်မှန်သောအချစ်သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပို၍ကြီးထွားလာသည်။
သင်၏စစ်မှန်သောအချစ်သည် မကျဆင်းသွားပါ။ ဤအချစ်သည် သာ၍ကြီးထွားလာမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည် လူတဦးအား စစ်မှန်သောအချစ်ဖြင့် ချစ်နိုင်ရန်အတွက် ထိုသူနှင့်အရင်ဆုံး သိကျွမ်းရမည်။ တစုံတဦးအား မြင်မြင်ခြင်း အမှန်တကယ် သိကျွမ်းရန်မဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ တစုံတဦးအပေါ်တွင် စစ်မှန်သော မေတ္တာကို မြင်မြင်ခြင်း ထားရှိနိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင် ပါ။ သင်သည် တစုံတဦးအားမြင်မြင်ခြင်းစွဲမက်သွားနိုင်ပြီး မြင်မြင်ခြင်းနှစ်ခြိုက်သွားနိုင်သည်။ သို့သော် သင်မသိ ကျွမ်း သော လူတဦးအား စစ်မှန်စွာချစ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
စာတန်က သင့်အားစစ်မှန်သောအချစ်ကို မသိစေလို၊ မတွေ့ကြုံမခံစားစေလိုပေ။ ထို့ကြောင့် သူသည် ချစ်ခြင်း မေတ္တာအတုများစွာကို ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်စေသည်။ သူသည် သင့်အား သင့်ဇနီးအပြင် အခြားသူများနှင့် လိင်ကိစ္စ၌ ပါဝင်ပတ်သက်စေလိုသည်။ သင့်ဘ၀ဟာ အသက်ရှင်ဖို့ တန်ဖိုးမရှိတော့ပါ ဟု သင်ထင်လာအောင် သင့်ဘ၀အား သူက ရှုပ်ထွေးစေလိုသည်။
ဘုရားသခင်သည် သင့်အား တစ်ဖက်ကမ်းကုန် ချစ်ပြီး သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးသောအရာများကိုသာ လိုလားသည်။ သူသည် သင့်အား အဖိုးထိုက်သောအချစ်ကို ရရှိစေလိုသည်။ ဈေးပေါသောလိင်ကိစ္စ မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍သူသည် သင့်အား လက်ထပ်စေလိုပါက၊ သူ့တွင် သင့်အတွက် သင့်တော်သောသူ တစ်ဦးရှိသည်။ သင့်အား တကိုယ်ကောင်း မဆန်စွာ ချစ်ပြီး တစ်ဘ၀လုံး သင့်အပေါ်တွင် ဆက်ကပ်အပ်နှံ ထားသောအဖော်တဦးအား သင်၌ ရှိစေလိုသည်။ ထိုနည်း တူ သင်ကလည်း ထိုသူအပေါ်သို့ တစ်ဘ၀လုံး ဆက်ကပ်အပ်နှံစေလိုသည်။ ဘုရားသခင်သည် သင့်အိမ်အား ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကောင်းကင်ဘုံလေးကဲ့သို့ ဖြစ်စေလိုသည်။
West piont ရှိ မစ္စစပီမြို့လေးတွင် ၂၅ နှစ်ကြာရှည်ခဲ့သော အိမ်ထောင်တစ်ခုသည် ကဗျာဆန်ဆန် လှပစွာ အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဒေသန္တရသတင်းစာအယ်ဒီတာ၏ သစ္စာရှိသောဇနီးဖြစ်သူသည် သူမ ဘုရာကျောင်း အပြင် ဘက်သို့ ထွက်လာခဲ့သည်။ သူမသည် ပြုံးရွှင်သောမျက်နှာဖြင့် မိတ်ဆွေများနှင့် စကားစမြည် ပြောပြီးနောက် အသင်းတော် ခြံဝင်း၏မြက်ခင်းပေါ်တွင် လဲကျဆုံးပါးခဲ့သည်။ သူမ၏အသက်ကို ကယ်တင်ရန် အရေးပေါ် အားထုတ်မှုများ မှာ အရာ မထင်ခဲ့ပါ။
သူမ၏ခင်ပွန်းနှင့် မိတ်ဆွေများအတွက်မူ၊ သူမသည် ဘုရားကျောင်းမှ လမ်းလျှောက်ထွက်၍ ကောင်းကင်ဘုံသို့ တိုက်ရိုက်တက်သွားသည်ဟု ထင်ရသည်။ မြို့ငယ်လေးသည် အံ့သြမိန်းမောသွားခဲ့သည်။ ကျန်ရစ်ခဲ့သောခင်ပွန်းဆီသို့ စာပေါင်းများစွာသည် ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ သူမသည် နွေးထွေးစွာဖြင့် လေးစားခြင်းနှင့် ချစ်ခြင်းမြတ်နိုးခြင်း ကို ခံခဲ့ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဈာပနာအခမ်းအနားပြီးနောက်တစ်နေ့၌ သူမ၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Henry Harris သည် သူ၏ဇနီးသည် ကိုရည်စူး၍ ခံစားချက်ပြင်းပြသော ဂုဏ်ပြုစာတစ်စောင်ကို ရေးခဲ့သည်။ Mr. Harris သည် ဤကဲ့သို့ သူ့ဇနီးသည်နှင့် ပတ်သက်၍ ရေးသားခဲ့သည်။ ““သူမဟာ ဘုရားကျောင်းထဲမှ တိုက်ရိုက်ကောင်းကင်ဘုံဆီ သို့ လမ်းလျှောက်ထွက်သွားခဲ့တယ်။”” မိတ်ဆွေတစ်ဦးပြောသလိုမျိုး သူမဟာ ဘုရားကျောင်းတက်ဖို့ West Point ကိုလာခဲ့ပြီး ဘုရားကျောင်းမှတစ်ဆင့် ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်။ သူမဟာ မစ္စစပီအမျိုးသမီးကောလိပ်မှ ဘွဲ့ရခဲ့ပြီး သင်းအုပ်ဆရာရဲ့လက်ထောက်လုပ်ဖို့ West Point သို့လာခဲ့တာကို ကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ West Point ရှိ သူမ၏အလုပ်ကို ယာယီအနေဖြင့်သာ သူမထင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ သခင်က သူမအား နိုင်ငံရပ်ခြားသာသနာပြုတစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ ခေါ်နေခဲ့တယ်လို့ သူမဟာ ယုံကြည်နေခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် သခင်က ကွဲပြားတဲ့ သတင်းစကားတစ်ခုကိုကျွန်တော့်အား ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကောင်မလေးဆိုတာကို ကျွန်တော်သိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနှစ်အတွင်းမှာ သူမအား Mrs. Henry လုပ်ဖို့ ကျွန်တော် သူမကို စိတ်လှုပ်ရှားစွာ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုပြီး နောက်တစ်နှစ်အကြာမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ပေါင်းဖက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ အလိုတော်ဟာ ပြီးမြောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို သံသယရှိစရာမလိုပါဘူး။ ဒီထက်ပိုပြီး ပျော်ရွှင် စရာကောင်းတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးမျိုးရှိတော့မယ် မထင်ပါဘူး။ ခေတ်ပေါ်စုံတွဲများက ဤအချက်ကိုယုံကြည်ရန် ခက်ခဲပေလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးဟာ ၂၅နှစ်အတွင်း တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ ရန်ဖြစ်စကား မများခဲ့ဖူးပါဘူး။ သဘောမတူညီမှုတွေတော့ ရှိကောင်းရှိခဲ့ပေမယ့် အဲဒီကြည်နူးဖွယ်နှစ်တွေကို ပြန်တွေး ကြည့်တဲ့အခါ၊ အကျိုးဆက်ဆိုးတွေရှိခဲ့တဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေ မရှိခဲ့တာကို သတိပြုမိပါတယ်။
နောက်ထပ်ရောက်လာမည့် သီတင်းပတ်တွေနဲ့လတွေဟာ ကျွန်တော့်အတွက် အလွန်ခက်ခဲမယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော် သိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့မျက်ရည်တွေကို တိတ်တဆိတ်စီးကျနိုင်မည့် တိတ်ဆိတ်ငြိမ် သက်တဲ့ နေရာလေး တစ်ခုကို ရှာဖွေဖို့ လိုအပ်မည့် အချိန်တွေဟာရောက်လာပါလိမ့်မည်။ အဲဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မှားတာ ဘာမှမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကောင်းကင်ဘုံဟာ ပိုပြီးမြတ်နိုးဖို့ကောင်းပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ Wanda ဟာ အဲဒီမှာရှိနေလို့ပါပဲ။ ပြီးတော့ သူမရဲ့တစိတ်တပိုင်းကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကလေး ၄ယောက်မှာ တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမှာ ကျွန်တော်ဟာ သူမအား ရိုးတံရှည်နှင်းဆီ ပန်းစည်းကိုလက်ဆောင်ပေးပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေးတဲ့ပန်းစည်းမှာ နှင်းဆီပွင့် ၂၅ခု ပါပါတယ်။ အင်္ဂါနေ့မှာတော့ ကျွန်တော်ဟာ ပန်းပြင်တဲ့သူအား ကျွန်တော့်မိန်းမရဲ့အခေါင်းကို နှင်းဆီပွင့် တွေနဲ့ ဖြည့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပြန်ဆုံတွေ့ချိန်အထိ ထိုနှင်းဆီပန်းတွေဟာ ကြာရှည်ခံဖို့ လိုပါ လိမ့်မည်။
ကျွန်တော်ဟာ ဒီ၂၅နှစ်အတွင်းမှာ သူမကိုချစ်ပါတယ်လို့ မပြောပဲ နေ့တစ်နေ့ကိုမကုန်လွန်စေခဲ့ ပါဘူး။ သို့သော်ငြားလည်း ကျွန်တော်ဟာ သူမကို ဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်း၊ သူမအတွက်ဘယ်လောက် အမှန်တကယ် ဂရုစိုက် ကြောင်းကို သူမ သိလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ကျွန်တော်ဟာ သူမအပေါ် ထားရှိတဲ့ မေတ္တာ အကြောင်းကို မပြောပဲ မနေနိုင်ပါဘူး။ အဖိုးထိုက်တန်လှတဲ့ ဤဇနီးနဲ့ဘ၀ကို ဝေမျှခွင့်ပေးတဲ့အတွက် ဘုရားသခင်ကို လည်း ကျေးဇူးမတင်ပဲ မနေနိုင်ပါဘူး။ အမှတ်ရစရာအဖြစ်အပျက် တွေအတွက်လည်း ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ခဲ့ ပါတယ်။ ဤသို့သော မေတ္တာသည် အဖိုးထိုက်လှသည်။
ယနေ့လူငယ်များသည်လည်း ဤသို့သော အိမ်ထောင်ရေးမျိုးကို မလိုချင်သလော။ အကယ်၍ သင်သည် ဘုရားသခင်အလိုတော်ကို ရှာ၍လိုက်နာပါက ဤသို့သောအိမ်ထောင်ရေးမျိုးသည် သင့်အတွက် လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
၁။ မိန်းကလေးဘက်မှ ““ငါသူ့ကို လုံးဝ အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူး”” ဟုတွေးခြင်းသည် ပြဿနာများကို ဖြစ်စေ နိုင်သည်။
၂။ မိမိ၏ရည်းစားကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်အတွက် မိမိ၏ကိုယ်ကျင့်တရားစံနှုန်းများကို စွန့်လွှတ်ခြင်းသည် မိန်းကလေး
တဦးအတွက် ၀မ်းနည်းဖွယ်ကောင်းလှသော အမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။
၃။ သင်သည် သူ့အတွက်မည်မျှပင် ကြိုးစားကြိုးစား၊ မည်မျှပင် သူ့အားချစ်စေကာမူ၊ ထိုသူအား သင့်ကို ချစ်လာရန်
၄။ သင်သည် အချစ်မရှိပဲအသက်မရှင်နိုင်ပါ။ ထိုအချစ်ကိုပေးရန်အတွက် လူများထံမှမမျှော်လင့်နိုင်ပါ။
၅။ သင်၌ ခန္ဓာပိုင်းအရ လိင်ဆက်ဆံရန်အသင့်ဖြစ်နေသော်လည်း၊ ထိုသို့ဖြစ်နေခြင်းက သင်သည် အမှန် တကယ်လိင်
၆။ မျက်မမြင်အချစ်မျိုးဖြင့်ချစ်နေသူကို ““အရူးအမူးတပ်မက်စွဲလမ်းသူ”” ဟုခေါ်သည်။
၇။ သင်သည် တစုံတဦးအား အရူးအမူးတပ်မက်စွဲလမ်းနေပါက၊ သင့်၏အချစ်စိတ်ခံစားချက်များသည် ထိန်းချုပ်ထားခြင်း
ကို ခံရပြီး သင်သည် သာမန်အသိတရားကို အသုံးမပြုတော့ပါ။
၈။ ရမ္မက်သည် တကိုယ်ကောင်းဆန်ပြီး သူ့အားအလျင်အမြန်ကျေနပ်စေခြင်းကို လိုလားသည်။
၉။ တစုံတဦးနှင့် လိင်ပိုင်းအရ စွဲမက်မှုရှိခြင်းက၊ ထိုသူနှင့်အမှန်တကယ်ချစ်ကျွမ်းဝင်နေသည်ဟု ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ပါ။
၁၀။ စစ်မှန်သောအချစ်သည် မကျဆင်းသွားပါ။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသာ၍ ကြီးထွားလာသည်။